KYAW CHAN NYEIN: သင့်အပေါ်ကောင်းစေချင်တဲ့မေတ္တာစေတနာလေးကိုတော့ အသိမှတ်ပြုပေးပါ..
ပုဂ္ဂိုလ်ကို မကြည့်ပါနှင့် စေတနာကို ပဲ ကြည့်ပေးပါ..
အပြည့်ပါ ပါတယ်.သည်းခံတယ်ဆိုတာ.ဒေါသ.လောဘ.ကိလေသာစိတ် အလွယ်တကူ ဖြစ်ခွင့် မပေးတာ
ဒါကြောင့်လိုချင်မှုကိုအလွယ်တကူ အဖြစ်မခံပါနဲ့.အလွမ်းမိုးမခံပါနဲ့ အာရုံတွေကို မှီခိုမထားပါနဲ့.
အခု လိုချင်နေတဲ့ အရာဟာ.မရှိရင်ဖြစ်လား?
မရှိလို့ ဖြစ်တယ်ဆိုရင်..နေလိုက်ဦးမယ်..ရယူဖို့ မကြိုးစားတော့ဘူးကွာ.စိတ်ခိုင်းတိုင်း လိုက်လုပ်နေရ တာ ..မပြီးဆုံးနိုင်တော့လို့ ပါ...ရလိုက်တယ်ဆိုတာ လည်းနောက်ဆုံးမှာတနည်းနည်းနဲ
သိပ်ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့သူ၊မာနတွေ အရမ်းကြီးနေတဲ့သူတွေဟာ. မိမိကိုယ်ကို .စိတ်အားငယ်နေမှန်း သတိမထား မိတတ်ပါဘူး..မိမိ ရှုံးရမှာ..ခံလိုက်ရမှာ.မိမိကြောက်တတ်တာ အားငယ်တတ်တာ သူများသိမှာ စိုးရိမ်၍ ကာကွယ်မှု အနေဖြင့် ဒေါသတွေ၊မာနတွေကို အလွယ်တကူ ထုတ်သုံးကာကွယ်လိုက်ချင်ပါတယ်..ဒါကြောင့် ကိလေသာ အလွယ်တကူ မဖြစ်အောင် သည်းခံနိုင်လေ လေ..စိတ် power မြင့်လေ လေပါပဲ...
၃။ဒိဠာသ၀-အသိမှား၊အမှတ်မှား၊အယူမှား ကို တပ်မက်နေတဲ့တဏှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။အ၀ိဇ္ဇာသ၀-သစ္စာကို မသိတဲ့မောဟ တရား ဖြစ်ပါတယ်..
ချိန်ကာလ သည် မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ ကို "မှီလှမ်းနိုင်သော" ကာလဖြစ်သည်။ "မှီနေ"
ရုံ ဖြင့် တင်းတိမ်မနေသင့်၊"ချဉ်းကပ် သင့်သေးသည်၊ ချဉ်းကပ်ရုံဖြင့်
ရောင့်ရဲမနေသင့် "လိုက်နာ"သင့် သည်၊ သို့ မှ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်မည်။
ရေကို မှီနေရ သော ငါးကလေးသည်.ကုန်းပေါ်သို့ ပစ်တင်လိုက်သောအခါ တဖျပ်ဖျပ်လှုပ်ခါရမ်းနေသကဲ့သို့ကိလေသာ ကာမဂုဏ်ကိုမှီ၍နစ်မွန်းနေသောစိတ်သည် ထိုကာမနယ်မှလွတ်မြောက်ရန် တရားအားထုတ်လိုက်သောအခါ တဖျပ်ဖျပ်လှုပ်ရှား ကာတည်ငြိမ်မှုမရှိ ပျံလွင်နေတတ်ပါသည်။
မွေးဖွားခြင်းနှင့်သေဆုံးခြင်း ၏ ကြားအချိန်အတွင်း
စစ်မှန်သော ဒုက္ခသစ္စာကို သိမြင် နိုင်ကြပါစေ။
ဘေးရန်ခတ်သိမ်း … ကင်းငြိမ်းကြပါစေ၊
Posted by KYAW CHAN NYEIN at 11:50 PM